मुड स्विंगले मर्माहत, किन हुन्छ मुड स्विंग? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ मुड स्विंगले मर्माहत, किन हुन्छ मुड स्विंग?
मुड स्विंगले मर्माहत, किन हुन्छ मुड स्विंग?
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७६ असार २५ गते, १०:१७ मा प्रकाशित
पुरुषभन्दा महिलाको मुड क्षणभरमै फेरिन्छ । त्यसैले महिलालाई बढी मुड स्विंगले सताउँछ भन्ने मान्यता छ । महिलालाई मात्र नभई पुरुषलाई पनि मुड स्विंगले सताउन थालेको पाइएको छ ।
मुड स्विंग हुनुमा मानसिकका साथै भावनात्मक कारण पनि रहेको हुन्छ । किन हुन्छ , मुड स्विंग ? यसबारे जानौं ।
के हो मुड स्विंग ?
मानसिक एवं भावनात्मक रुपमा असन्तुलनको स्थिती नै मुड स्विंग हो । आफ्नो भावनामा नियन्त्रण गर्न नसक्दाको अवस्थामा मुड स्विंगको स्थिती उत्पन्न हुन्छ । कहिले एकदम खुशी हुने र कहिले एकदम रुने गर्छन् ।
मुड स्विंगको अवस्थामा के कुराले खुशी दिन्छ र के कुराले बेखुशी गराउँछ व्यक्ति स्वयंले थाहा पाउन सक्दैन् । यो मानसिक तनावको कारणले पनि हो । मुड स्विंगबाट महिला बढी प्रभावित रहँदै आएको पाइएको थियो । महिलाले निजी भावना अरुसँग नबाँड्ने हुँदा यो समस्या महिलालाई बढी रहेको बताइएको थियो ।
तर, अहिले पुरुषपनि पीडित हुने गरेको पाइएको छ । मानसिक दबाबमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकोले पुरुषहरुलाई पनि यो समस्या हुने गरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
हर्मोनको असन्तुलनले पनि मुड स्विंग हुने गरेको पाइएको छ । पुरुषमा तीन चार महिनामा हर्मोनको असन्तुलन हुने गरेको पाइएको छ । हर्मोन असन्तुलन हुँदा मुड बिग्रन्छ । त्यस्तै, महिलामा पनि हर्मोनको असन्तुलनले गर्दा मुड स्विंगको अवस्था भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
चमकधमकको दुनियाँमा विभिन्न अपेक्षाहरु जागृत हुनु स्वभाविक मानिन्छ । अपेक्षाहरु सम्हाल्न नसक्दा दबाब महसुस हुन्छ । अपेक्षाहरु पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा मानसिक तनाब महसुस हुन्छ । मनमा धक्का लागेको अवस्थामा कुनै कुरा गर्न मन नलाग्ने हुन्छ ।
कतिपय पुरुष तनावको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । तनावको सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुड खराब हुन्छ । तुरुन्तै मुड परिवर्तन भएको बेला सन्तुलनमा ल्याउन कठिनाई हुन्छ ।